Aglet Apk Download Ho an'ny Android [Lalao Vaovao] - Luso Gamer
Aglet Apk Download Ho an'ny Android [Lalao Vaovao]
Enga anie 13, 2022 by John Smith
Ankehitriny, karazana lalao virtoaly samihafa dia mahomby amin'ny fahazoana laza. Saingy androany eto izahay dia nitondra zava-baovao sy miavaka ho an'ny mpilalao android. Eny, tsy miresaka momba ny fampiharana kilalao farany hafa Aglet Apk izahay.
Maimaim-poana idirana ny fampiharana lalao ary tsy mila famandrihana na fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo. Ankoatra izany, ny gameplay dia ahitana endri-javatra isan-karazany. Ao anatin'izany ny mpanentana virtoaly mivantana manankarena amin'ny fitaovana fanitsiana kely.
Na dia eo aza ny fizotry ny filalaovana Lalao 3D toa saro-takarina kely ary mila kajikajy maranitra. Na izany aza, eto isika dia hiresaka momba ireo antsipiriany ireo tsikelikely. Noho izany dia nahazo ity fetisy ity ianao amin'ny fanangonana kiraro tsy manam-paharoa ary vonona ny hilalao ilay anjara ary alao ny Aglet The Sneaker Game.
Inona ny Aglet Apk
Aglet Apk dia heverina ho fampiharana lalao sneaker virtoaly mifototra amin'ny virtoaly. Aiza no atolotra ireo tia sneaker ity fahafahana lehibe ity handehanana sy hikaroka harena miafina samihafa. Ary mahazo vola maimaim-poana amin'ny lalao ihany koa.
Ny lalao dia manomboka amin'ny alalana sasany sy ny antony. Eo no angatahina ny mpilalao mba hahatakatra ny lalao aloha. Satria tsy misy fahatakarana ny fitsipika sy ny fitsipika. Toa sarotra ny mahazo lalao an-tserasera.
Mba hanamora ny fizotran'ny fahatakarana dia efa nametraka torolàlana feno ireo mpamorona. Ankehitriny mamaky sy manaraka ny mpitari-dalana dia hanampy hahatakatra gameplay. Tsarovy fa ny lalao dia mandeha tanteraka ao anaty zava-misy virtoaly miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso feno.
Eny, ny fampandehanana ny serivisy GPS dia hanampy amin'ny fanaraha-maso ny dian-tongotry ny mpilalao. Ny fanaraha-maso ny dian-tongotra dia hanampy amin'ny fahazoana ireo toerana notsidihina. Raha manandevo ianao ary vonona ny hanangana ny fanangonana sneaker malaza indrindra ao anaty lalao dia apetraho ny Aglet Game Download.
Anaran'ny fonosana app.aglet.mobile
Android takiana 7.0 ary Plus
SOKAJY Games - Adventure
Na dia efa nanome sneakers malaza aza ny manam-pahaizana ao amin'ny fivarotana. Saingy ny famahana ireo kiraro ireo dia mitaky vola amin'ny lalao. Raha tsy misy vola miditra sy mampiasa vola amin'ny lalao dia toa tsy azo atao ny mamoha ireo kiraro ireo.
Raha vonona ny hahazo ny vola maimaim-poana ianao dia tsy maintsy manokatra ny sarintany ary manomboka mandeha. Ny fandehanana an-tongotra sy ny fanatratrarana tanjona dia hanampy amin'ny fahazoana vola maimaim-poana amin'ny lalao. Na ny fijerena ireo toerana miafina aza dia hanampy amin'ny fahazoana tsy ampoizina isan-karazany.
Rehefa afaka mahazo vola ampy ianao dia ampiasao izany mba hamahana sneakers samihafa. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny lalao dia manome ity tsena virtoaly ity. Aiza ny mpilalao mitsidika sy miantsena fanangonana samihafa.
Na dia tsy misy aza ny tsena raha ny marina. Na izany aza, ho hita ao anatin'ny lalao miaraka amin'ny endrika virtoaly tonga lafatra. Eritrereto hoe lasa mpilalao matihanina ianao, dia ny ekipa mpanohana ny lalao dia mitazona ireo hetsika mivantana sy fifaninanana samihafa.
Ny fandraisana anjara amin'ireo fifaninanana ireo dia hanampy amin'ny fahazoana valisoa samihafa sy zava-bita amin'ny fotoana tena izy. Tsarovy fa ny sneakers dia mila averina averina ara-potoana satria ny fandaka azy ireo dia hanimba ny tsingerin'ny fiainana. Noho izany dia vonona ny hilalao ny lalao miaraka amin'ny namana ianao dia misintona ny lalao Aglet.
Maimaim-poana ny fidirana amin'ny rakitra lalao.
Tsy maintsy atao ny fisoratana anarana.
Ny fametrahana ny lalao dia manolotra ity tontolo virtoaly tena izy ity.
Aiza no atolotry ny mpilalao ireo zavatra virtoaly samihafa ireo.
Anisan'izany ny tsena virtoaly sy ny zaridaina sns.
Tsidiho ny tsena ary mividiana fanangonana samihafa.
Ireo fanangonana ireo dia azo aseho ao anatin'ny fifaninanana sy hetsika.
Arakaraka ny fanangonam-bokatra tsy manam-paharoa anananao dia hitombo ho azy ny vintana handresy.
Misy fivarotana inbuilt azo vidiana.
Ny fanaraha-maso sy ny fanatratrarana tanjona dia hanampy amin'ny fahazoana vola amin'ny lalao.
Notazonina ho mavitrika sy mora amin'ny finday ny interface interface.
Ahoana ny fametrahana Aglet Apk
Ny fampiharana lalao dia navoaka vao haingana tao an-tsena ary azo idirana amin'ny Play Store. Na izany aza, maro amin'ireo mpilalao Android no efa nisoratra anarana ireo fitarainana momba ny olana amin'ny fidirana. Satria noho ny Android compatibility sy ny olana lehibe hafa.
Maro amin'ireo mpampiasa Android no mety tsy afaka miditra amin'ny rakitra Apk mivantana. Ka inona no tokony hataon'ny mpilalao Android amin'ny toe-javatra toy izany rehefa tsy afaka miditra amin'ny fampiharana lalao izy ireo? Noho izany dia sahiran-tsaina ianao ary mitady sehatra tena izy mba hisintonana, tsy maintsy mitsidika ny tranokalanay ary misintona Aglet Android.
Ny fampiharana lalao dia efa aseho amin'ireo lalao hafa ao amin'ny Play Store. Midika izany fa vokatra azo antoka sy mety ihany no aseho ao amin'ny Play Store. Na dia talohan'ny fanolorana ny lalao ao anaty fizarana download. Efa nametraka azy tamin'ny finday samihafa izahay ary hitanay fa azo antoka ny hilalao.
Misy lalao kisendrasendra hafa navoaka izay azo alaina avy eto. Tsindrio fotsiny ny URL nomena ary ankafizo ny milalao maimaim-poana ireo lalao ireo. Anisan'izany ny New Dawn Apk ary Pokemon Lets Go Pikachu Apk.
Raha nahazo an'io fetisy matanjaka io ianao amin'ny fanangonana sneakers. Saingy tsy afaka manatanteraka izany amin'ny tena fiainana noho ny tsy fahampian'ny loharano sy ny fahafahana. Avy eo ny soso-kevitray ho an'ireo mpankafy dia ny fametrahana Aglet Apk. Satria eto ny mpilalao dia afaka mahazo miampy mampiseho ny fanangonana sneakers tsara indrindra ao anatin'ny tontolo virtoaly.
Sokajy Adventure, Games Tags Lalao 3D, Aglet Apk, Lalao Aglet, Lalao Aglet Download, Lalao Aglet Sneaker aterineto Post Fikarohana
Exambro Apk Download ho an'ny Android [Fampiharana farany]